HTC Wildfire R70, njedebe ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Taiwanese na Mediatek's Helio P23 | Gam akporosis
HTC ka na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ama ama, ihe akaebe nke a na-abịa n'ụdị ekwentị mkpanaaka ọhụrụ, nke bụ Ọkụ R70, otu ọnụ ala dị ọnụ ala nke na-ahọrọ ọmarịcha mma nke arụmọrụ na-ajụ.
Ngwaọrụ a ka amachara ọkwa, ma ọ bụghị na ọnụahịa na nnweta nkọwa. Agbanyeghị, anyị ga-enweta ozi a n'oge na-adịghị anya, ee, ọ bụ ezie na anyị amaworị na India ga-abụ ahịa mbụ a ga-ere ya.
Atụmatụ na nkọwa nke HTC Wildfire R70
N'ịbụ onye njedebe dị ala, a 6.53-anụ ọhịa IPS LCD na ihuenyo na HD + mkpebi nke 1,560 x 720 pikselụ (19.5: 9) bụ ihe anyị na-ahụ na ama a. Onye a nwere ihe odidi di ka odidi mmiri na akpo ya. N'aka nke ya, ọ dabara na ahụ nwere akụkụ 163.2 x 77.8 x 8.9 mm na ngụkọta nke 186 gram.
HTC Wildfire R70 na-ejikwa a Mediatek Helio P23 chipset, SoC nke na-abịa na Mali-G71MP2 GPU maka eserese na nhazi egwuregwu. SoC a nwere isi asatọ ma na-enye ohere izu ike kachasị nke 2.3 GHz. Na mgbakwunye, a na-ejikọ ya na 2 GB RAM na 32 GB nchekwa dị n'ime, enwere ike ịgbasa site na iji kaadi microSD.
Obodo kwụụrụ nke ọnụ ya na-akwado a Batrị ikike 4,000 mAh Ọ na-egosipụta teknụzụ na-akwụ ụgwọ 10W. Ọ na-abịa na gam akporo 9 achịcha dabere na nhazi ụlọ ọrụ nke Sense na-ahazi, onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ ma a ga-enye ya na-acha anụnụ anụnụ na oji.
Na usoro nke ịse foto, HTC's Wildfire R70 biara na igwefoto nke atọ nke 16 MP (f / 1.7) + 2 MP (f / 2.4) + 2 MP (f / 2.4) na onye na-agba egbe 8 MP na oghere f / 2.0 maka selfies, oku vidiyo, ihu ihu na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC Wildfire R70, njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Taiwanese na Mediatek's Helio P23
1v1 agha n'etiti ndị egwuregwu na Knockdown Heroes na ya ọtụtụ egwuregwu